Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Politika tamin’ny Marsa 2010
Politika · Marsa, 2010
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Marsa, 2010
08 Marsa 2010
Pologne: Notorian'ny mpianatra ny minisitry ny fampianarana teo aloha
Mpanoratra Magda Pilat · Polonina
Nanapan-kevitra ny hitory ny Minisitry ny Fampianarana taloha Ryszard Legutko ireo mpianatry ny lisea roa A noho ny niantsoany azy ireo ho ‘zaza naranina (be sitrapo)’. Nanao fanangonan-tsonia , natolony ny talen'ny sekoly, tamin'ny herintaona ny mpianatra roa avy ao Wroclaw, Zuzanna sy Tomasz. Nolavin'ny tale izany. Niadiana hevitra ny...
05 Marsa 2010
Tezitra amin'ny fanambaran'i Isiraely momba ny Moske Ibrahim ny Palestiniana
Mpanoratra Mays Dagher · Israely
Nanao fanambarana vao haingana ny Praiminisitra Isiraeliana Binyamin Netanyahu fa manam-pikasana ny hametraka ny Fasan-dRahely any Bethlehema sy ny Mosake Ibrahim/Zohin'ny (Fasan'ny) Patriarka any Hebron, izay samy any Cisjordanie, samy faritra fehezin'ny firenen-kafa izy roa ireo, ho toerana Lovan'ny Jiosy. Nampitroatra ny Palestianiana izany fanambarana izany; Heverina ho toeram-pandevenana an'i...
02 Marsa 2010
Bolgaria: Adihevitra momba ny Islamo
Nisy olona 40 nanatrika adihevitra mitondra ny lohateny hoe “Islamo heverina ho mampatahotra – lamaody indray ve?” izay notontosaina tao amin'ny “Trano mena” Ivo ho an'ny kolontsaina sy ny adihevitra tao an-drenivohitr'i Bolgaria, Sofia tamin'ny 26 febroary teo. Anisan'ny mpandray anajra fitenenana tamin'izany i Saleh Breh, mpahay haisaina (psychologue) ao...